အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာလျှောက်ထားလိုသူများအတွက် လျှောက်နည်း အပြည့်အစုံ – Daily Feed MM
အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာလျှောက်ထားလိုသူများအတွက် လျှောက်နည်း အပြည့်အစုံ
Admin_John | June 21, 2021 | Knowledge | No Comments
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က မြေကွက်ကလေးဝယ်လို့ အိမ်အသစ်တစ်လုံးဆောက်ပြီးသွားတော့ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာ တပ်ချင်တာ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ရမလဲလို့ မေးလာတာနဲ့ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ပုံကလေးကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
မိမိနေထိုင်ရာ မြို့နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာထံမှာ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အထောက်အထား တွေနဲ့အတူ ပူးတွဲတင်ပြကာ လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။လျှောက်လွှာပုံစံနမူနာကို ပါရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီလျှင် နေ့ချင်းပြီးတပ်ဆင်ပေးပါမည်။
(၁) နေထိုင်သူကိုယ်တိုင် လျှောက်ထားရမည်။
(၂) အိမ်ထောင်စုစာရင်း/ ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား၊ တာဝန်ခံသူ၏ ကတိဝန်ခံချက် ပါရှိရမည်။
(၃) ဓာတ်အားသုံးစွဲမည့် အဆောက်အဦးသည် လျှပ်စစ်ကြောင့် အန္တရာယ် မဖြစ်စေရ။
(၄) ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ပေ ၃၀၀ အတွင်း ရှိရမည်။
(၅) ထရန်စဖော်မာနှင့် ဓာတ်အားလိုင်း ဝန်အားနိုင်နင်းရမည်။
(၆) အိမ်တွင်းဝါယာကြိုးများ သတ်မှတ် စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ တပ်ဆင်ပြီး ဖြစ်ရမည်။
အိမ်သုံးမီတာအတွက် ပေးသွင်းရမည့် နှုန်းထားများစဉ် အကြောင်းအရာ Digital မီတာ ပေးသွင်းရမည့်နှုန်းထား (ကျပ်)
၁ မီတာသတ်မှတ်ကြေး ၆၅,၀၀၀
၂ မီတာပုံးခွံ ၁၅,၀၀၀
၃ အာမခံစပေါ်ငွေ ၄,၀၀၀
၄ ကြိုးသွယ်ခ ၂,၀၀၀
၅ မီးဆက်ခ ၂,၀၀၀
၆ ကြီးကြပ်ခ ၁,၀၀၀
၇ မှတ်ပုံတင်ကြေး ၁,၀၀၀
၁ ၁ ယူနစ်မှ ၁၀၀ ယူနစ်အထိ ၃၅ ကျပ်
၂ ၁၀၁ ယူနစ်မှ ၂၀၀ ယူနစ်အထိ ၄၀ ကျပ်
၃ ၂၀၁ ယူနစ်နှင့် အထက် ၅၀ ကျပ်
လျှောက်လွှာပုံစံသည် မြို့နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးတွင် ရယူကာ
မန္တလေး/ရန်ကုန်/ရှမ်းပြည်နယ်/ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်း
နေ့စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ရက်နေ့
အကြောင်းအရာ။ အိမ်သုံးမီတာ(၁) လုံးတပ်ဆင်သုံးစွဲခွင့်ပြုပါရန်လျှောက်ထားခြင်း။
အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မန္တလေးခရိုင်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ ……… ရပ်ကွက်၊ အကွက်( )၊ …………… လမ်းရှိ ဦး/ ဒေါ်…………………. မှတ်ပုံတင်အမှတ် ………………… ၏ နေအိမ်တွင်၊ အလင်းရောင်အသုံးအတွက် အိမ်သုံးမီတာ(၁) လုံးတပ်
ဆင်သုံးစွဲခွင့်ပြုပါရန် လေးစားစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်။တပ်ဆင်သုံးစွဲခွင့်ရရှိပါက ဌာနမှချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့် ညွှန်ကြားချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုအပ်ပါသည်။
မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က ေျမကြက္ကေလးဝယ္လို႔ အိမ္အသစ္တစ္လုံးေဆာက္ၿပီးသြားေတာ့ အိမ္သုံးလွ်ပ္စစ္မီတာ တပ္ခ်င္တာ ဘယ္လို ေဆာင္႐ြက္ရမလဲလို႔ ေမးလာတာနဲ႔ အိမ္သုံးလွ်ပ္စစ္မီတာ ေလွ်ာက္ထားေဆာင္႐ြက္ပုံကေလးကို တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။
မိမိေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာထံမွာ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အေထာက္အထား ေတြနဲ႔အတူ ပူးတြဲတင္ျပကာ ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ေလွ်ာက္လႊာပုံစံနမူနာကို ပါေရးေပးလိုက္ပါတယ္။
ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီလွ်င္ ေန႔ခ်င္းၿပီးတပ္ဆင္ေပးပါမည္။
(၁) ေနထိုင္သူကိုယ္တိုင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
(၂) အိမ္ေထာင္စုစာရင္း/ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထား၊ တာဝန္ခံသူ၏ ကတိဝန္ခံခ်က္ ပါရွိရမည္။
(၃) ဓာတ္အားသုံးစြဲမည့္ အေဆာက္အဦးသည္ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစရ။
(၄) ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ေပ ၃၀၀ အတြင္း ရွိရမည္။
(၅) ထရန္စေဖာ္မာႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္း ဝန္အားႏိုင္နင္းရမည္။
(၆) အိမ္တြင္းဝါယာႀကိဳးမ်ား သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္အညီ တပ္ဆင္ၿပီး ျဖစ္ရမည္။
အိမ္သုံးမီတာအတြက္ ေပးသြင္းရမည့္ ႏႈန္းထားမ်ားစဥ္ အေၾကာင္းအရာ Digital မီတာ ေပးသြင္းရမည့္ႏႈန္းထား (က်ပ္)
၁ မီတာသတ္မွတ္ေၾကး ၆၅,၀၀၀
၂ မီတာပုံးခြံ ၁၅,၀၀၀
၃ အာမခံစေပၚေငြ ၄,၀၀၀
၄ ႀကိဳးသြယ္ခ ၂,၀၀၀
၅ မီးဆက္ခ ၂,၀၀၀
၆ ႀကီးၾကပ္ခ ၁,၀၀၀
၇ မွတ္ပုံတင္ေၾကး ၁,၀၀၀
၁.၄.၂၀၁၄ ရက္ေန႔မွစတင္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခႏႈန္းထားရွင္းလင္းခ်က္
၁ ၁ ယူနစ္မွ ၁၀၀ ယူနစ္အထိ ၃၅ က်ပ္
၂ ၁၀၁ ယူနစ္မွ ၂၀၀ ယူနစ္အထိ ၄၀ က်ပ္
၃ ၂၀၁ ယူနစ္ႏွင့္ အထက္ ၅၀ က်ပ္
ေလွ်ာက္လႊာပုံစံသည္ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ႐ုံးတြင္ ရယူကာ
မႏၲေလး/ရန္ကုန္/ရွမ္းျပည္နယ္/ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း
ေန႔စြဲ၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ရက္ေန႔
အေၾကာင္းအရာ။ အိမ္သုံးမီတာ(၁) လုံးတပ္ဆင္သုံးစြဲခြင့္ျပဳပါရန္ေလွ်ာက္ထားျခင္း။
အထက္အေၾကာင္းအရာပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မႏၲေလးခ႐ိုင္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ……… ရပ္ကြက္၊ အကြက္( )၊ …………… လမ္းရွိ ဦး/ ေဒၚ…………………. မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ………………… ၏ ေနအိမ္တြင္၊ အလင္းေရာင္အသုံးအတြက္ အိမ္သုံးမီတာ(၁) လုံးတပ္
ဆင္သုံးစြဲခြင့္ျပဳပါရန္ ေလးစားစြာေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။တပ္ဆင္သုံးစြဲခြင့္ရရွိပါက ဌာနမွခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိျပဳအပ္ပါသည္။
ကိုဗစ် ဘယ်တော့ပြီးမလဲ.. ကာကွယ်ဆေး ဘယ်တော့ရမလဲ သိချင်သူတွေအတွက်
ငါးစားသူတိုင်း သိသင့်သည့် ငါးအရိုးစူးလျှင် ပျောက်ကင်းမည့်နည်းလမ်းများ
ရေညစ် ၊ ရေနောက်များကို အရေးပေါ် ရေသန့်စင်နည်း
ကျန်းမာ သက်ရှည်ဖို့ အရေးကြီးသော အချက်များ